Goorma ayuu Aaron Ramsey kulankiisa ugu horreeya u ciyaari doonaa Juventus? Koox uu neceb yahay ayuuna ka hor imaan doonaa. – Gool FM
(Turin) 17 Luulyo 2019. Kubad sameeyaha sida xorta ah ku yimid kooxda Juventus Aaron Ramsey ayaa lagu soo warramayaa inuu isbuuca soo aadan ciyaari doono kulankiisii ugu horreeyay kooxdiisa cusub, nasiib wanaagse wuxuu ka hor imaan doonaa koox uu waligiis necbaa.
Xiddiga reer Wales ayaa si xor ah ku yimid kooxda Bianconerri kadib markii 30-kii June 2019 uu dhamaaday heshiis uu kula jiray kooxda Gunners.
Aaron oo la hadlay saxaafadda talyaaniga ayaa sheegay inuu iska diiday dalabyo badan oo uu ka helay kooxo dhawr ah oo ka dhisan yurub, wuxuuna qiray inuu doorasho xor ah ku doortay kooxda difaacaneysa horyaalka talyaaniga.
Maurizio Sarri ayaa kulankiisa ugu horreeya maamuli doona Juventus isbuuca soo aadan marka ay kulan diyaar garow ah la ciyaareyso Tottenham Hotspur.
Aaron Ramsey oo ka yimid Gunnars ayey cadaawad weyn kala dhaxeysaa kooxda Spurs, wuxuuna ka hortagay 11-jeer intii uu ku sugnaa Emirates Stadium.
28-jirkaan ayaa Gunners u dhaliyay 64-gool, 369 kulan uu dhamaan tartamada oo dhan u matalay kooxda intii u dhaxeysay 2008 ilaa 2019